Tenga Mota Yemukati Atmosphere RGB LED Mwenje Strip - Kutakura Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
Mota Yemukati Atmosphere RGB LED Chiedza Strip
Emitting Color USB Remote Midzanga Kure Mudzanga APP USB APP
ruvara 4pcspedza 4pcspedza 4pcspedza
USB Remote / 4pcsx9leds Mudzanga Remote / 4pcsx18leds Mudzanga Remote / 4pcsx12leds Mudzanga Remote / 4pcsx9leds Mudzanga APP / 4pcsx12leds Mudzanga APP / 4pcsx9leds USB Remote / 4pcsx18leds USB Remote / 4pcsx12leds USB APP / 4pcsx18leds USB APP / 4pcsx12leds USB APP / 4pcsx9leds Mudzanga APP / 4pcsx18leds
Mota Yekunze Atmosphere RGB LED Mwenje Strip - USB Remote / 4pcsx9leds yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Muenzaniso Zita: Mota yemukati mwenje
Item Dhayamita: 1cm
Rudzi rwezvinhu: 1
Item Kurema: 0.3kg
Chinyorwa: ABS + Silica gel + Led
Ruvara rweShell: Nhema
Kurongedza: 4pcs / set
Ruvara rwemwenje: tsvuku, girini, bhuruu, chena, orenji, yero, cyan, pepuru
Kupenya kwechiedza: chinogadziriswa
Nhamba yemamodhi: 8 modes
Rudzi rwe LED: 5050 SMD;
Girobhu Yakawanda: 4pcs (36LEDs / 48 LEDs / 72LEDs) Chiedza
Voltage: 12V Inzwa Zvinotaurwa, DC 5V
Colors & Modes:
Kusanganisira 4 Mimhanzi yekudzora modes uye kupenya kwakadzima.
8 mavara modhi: Dzvuku, Girinhi, Bhuruu, Chena, orenji, Yero, Cyan, Pepuru.
4 otomatiki Shanduko Modes: 2 svetuka mode kutonga, 2 fade mode kutonga.
4 Mimhanzi Sensor Modes APP Yakadzora & Isina waya Kubatanidza: Mahara kurodha pasi purogiramu nekukenya QR kodhi Inobvumirana zvakakwana ne iPhone ne Android. Ongorora: 1. tora iyo Bluetooth. 2.connect kumwenje mitsetse kuburikidza neBluetooth. 3.vhura iyo app kuti usarudze nzira dzaunoda. Batsira iwe kuti ugadzire inonakidza uye inoshamisa mamiriro.
Multi-Ruvara & Yemimhanzi Kudzora: Anopfuura masere masere uye matani akasiyana esarudzo (Kubwaira, Flashing, Kupenya, Etc), unogona kugadzira rako rakasarudzika ruvara. Mwenje yemota yemukati inoenderana nemumhanzi pafoni yako kana chero ruzha rwunotorwa kubva maikorofoni saka mwenje unozoshandura mavara avo zvichitevera mutinhimira wemumhanzi, zvichikuita kuti unzwe senge wakagara mune yemumhanzi showa.
Yakakwana Mota Kushongedza: Inzwi rinonzwisisika basa, iro ruvara richachinja zvinoenderana nemumhanzi mutinhimira. Chigadzirwa chakakura chekupfeka mota yako, kukwidziridzwa kwakakwana kwekusimudzira mota yako uye kuwedzera kuchengetedzeka kwekutyaira masikati neusiku.
Nyore Kuisa: Unganidza marara emota, wobva wamenya kumashure 3M mbiri-mativi tepi; inogona kuiswa nyore nyore mugeji
Unganidza mudzanga wemotokari
Bvarura iwo maviri-mativi ekunamatira tepi uye unamate pane yakachena uye yakaoma pamusoro
Skena iyo QR kodhi nefoni yako (iPhone / Android) kurodha pasi iyo APP
Batidza matambo emwenje neBluetooth kutanga, wozovhura iyo APP kubatanidza matambo emwenje kuBluetooth, pakupedzisira DIY yako mavara nemamodhi parunhare rwako.
Bhatiri haina kuiswa
Iyo iri kure inofanirwa kunongedza kune iyo inogamuchira bhokisi uye padyo neanogamuchira.
Ndokumbira ubvise bhatiri chivharo usati washandisa kure
Iyo sensor inofanirwa kuiswa kana padyo nemukurukuri
Ndokumbirawo upukute penya nzvimbo usati waisa iyo Car LED Strip Mwenje
Ndokumbirawo USVANZE iyo infrared inogamuchira asi uratidze iyo kumusoro, kuti igone kugamuchira iyo chiratidzo kubva kune Remote Controller. Ndokumbira utarise kuInfrared Receiver kana uchishandisa Remote Controller.
Iyo iri kure iri 16.4ft, ndapota nemutsa cherekedza iyo.
1 set Chiedza
zvese zvinoshanda !! :)
Yakakodzera Ruvara, kupenya kwakasununguka zvishoma asi iwo anotaridzika akanaka husiku! Ini ndakatenga iyo modhi neapp, ndakabata nemusoro vara rekupedzisira pane, zvakashata sei iwe unogona chete kuchinja kubva kuapp, iyo yandaitoziva ndisati ndaisa odha.
Yakanaka asi isina mabhatiri Zvakadai sekutsanangurwa